त’स्करी रो’क्न खो’ज्दा आ’फै मा’रिए असइ गो’विन्द,,,हेर्नुहोस् !
October 18, 2020 October 18, 2020 adminLeaveaComment on त’स्करी रो’क्न खो’ज्दा आ’फै मा’रिए असइ गो’विन्द,,,हेर्नुहोस् !
२ कात्तिक, काठमाडौं । कैलालीको अस्थायी प्र,हरी बिट, जुगेडाका इञ्चार्ज प्र,हरी सहायक निरीक्षक (असई) गोविन्द विकले दुई दिनअघि मात्रै सी,मा क्षेत्रबाट अ’वैध सुर्ती बरामद गरेका थिए । नेपाल–भारत सी,मामा हेर्ने यो बिटमा विकले नेतृत्व सम्हालेको पनि धेरै भएको थिएन । लामो समयदेखि चल्दै आएको त’स्करीको लाइन छिट्टै भत्का,उन लागि परेपछि उनी सबैको तारो बनेका थिए । कैलाली प्र,हरी प्र,मुख एसपी अनुपम शमशेर राणा भन्छन्, ‘उनी एकदमै मेहनती थिए, केही गर्छु भन्ने भा,वना बोकेर भर्खरै मात्र सीमामा गएका थिए ।
०७४ सालमा दिपालयस्थित प्र,हरी ता,लिम केन्द्रबाट असईमा सेवा प्र,वेश गरेका बिक कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा हालै स्ना,तकोत्तरमा समेत भर्ना भएका थिए । २८ वर्षीय उनी प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिष्प,र्धा गरेर काँधमा खु’कुरी चिह्न भिरेर देशको सेवा गर्ने तयारीमा लागेका थए । त्यसका लागि दर्खा,स्त पनि दिइसकेका थिए, हालै काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर कैलाली फर्किएका थिए । अन्य परीक्षाको तयारी त्यहीँबाट गरिरहेका थिए ।
तर, दु’र्भाग्य जनताको जीउधनको र,क्षा गर्ने प्र,ण गरेका उनको आफ्नै ज्या’न भने जो’गिएन । कानुन कार्यान्वयन गराउने क्रममा उनको ज्या’न ग’यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्र,हरी प्र,मुख उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘उनको ट्र्याक रेकर्ड एकदमै राम्रो थियो, पछिल्लो समय तस्क,रहरूलाई उनको कामले तना,व भएको थियो ।’ शनिबार बेलुकी बिक ज,वान रामबहादुर साउदलाई लिएर बा ५८ प ५२८४ नम्बरको मोटरसाइकलमा ग,स्तीका लागि निस्किएका थिए । त्यसक्रममा त’स्कर समूहले उनको यो’जनाब,द्ध रुपमा घाँ’टी रे’टेर ह’त्या गरेको छ ।
आइतबार बिहान मोहना नदीमा फ्याँकेको अवस्थामा उनको श’व भेटिएको छ भने ज,वान साउद अझै भेटिएका छैनन् । ‘उनको खोजीमा सशस्त्र प्रह,री बलको गोताखोरसँगै पौ’डिन जान्ने प्र,हरीको द,क्ष जनशक्ति पनि परिचा,लन गरेका छौं’, ! source- News of nepal
आज देखि को`रोना परिक्षण र उपचारको सम्पुर्ण ख`र्च सरकारले नब्यो`होर्ने भएकोछ, ताली या गालि ?
ओली समूहले गर्‍यो भीम रावलसहित तीन नेतालाई कार`बाही,,,हेर्नुहोस् ।
प्रचण्डलाई भेटेर फर्किएलगत्तै गृहमन्त्री थापालाई भेट्न पुगे प्रधानमन्त्री ओली,,,हेर्नुहोस् ।